Kuthetha ukuthini ukuphupha uMbingeleli? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ukuphupha umbingeleli kubonisa ukuba kuya kufuneka ujonge ngakumbi kumhla wakho. Ixesha elidlulileyo lihambile kwaye akusekho sizathu sokuhlala kuyo yonke into eyenzekileyo, kuba ayizukuphila kwaphela. Ngaphezulu kwako konke, kufuneka ukuba ufune ukuzikhulula, kwaye ukufezekisa le njongo kuya kufuneka ucinge ngaphambili.
Kuya kubakho iintlobo ezininzi zemiba eyahlukileyo eyahlukileyo enye kwenye, ke iphupha liya kuba neentsingiselo ezahlukeneyo. Zama ukukhumbula iinkcukacha nayo yonke into eyenzekileyo, kuba iya kuba yeyona iphambili. Ukuba uphuphe eli phupha, akukho nto ingcono kunokuqhubeka apha ukuze ufumane ukuba kuya kuthetha ntoni na.
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha umbingeleli?
2 Iphupha lokubona umfundisi
3 Ukuphupha ngokuthetha nomfundisi
4 Ukuphupha ngomfundisi okuvayo uvuma
5 Iphupha lokuba ngumfundisi
6 Ukuphupha utata epulpitini
7 Ukuphupha ndithandana nomfundisi
8 Iphupha malunga noMbingeleli ogunyazisiweyo
9 Phupha malunga nentsikelelo kaBawo
10 Ngaba inoluhlobo oluthile lwentsingiselo embi?
Kuthetha ukuthini ukuphupha umbingeleli?
Umbingeleli ubonisa abantu indlela yokuhamba, akahlukanga kakhulu kumfundisi, kodwa olutshintsho kuphela yinkolo. Ukuphupha umbingeleli kubonisa le mfuno yokufumana ulwalathiso ngokuzolileyo. Ukuba nomonde kunye nokungafuni "ukugqitha" izinto yingongoma ekufuneka uyiqwalasele rhoqo.
Uloyiko lokoyisa ixesha elidlulileyo lonakalisa izicwangciso zakho zangoku kunye nekamva lakho, kuba liyakuthintela. Ixesha lotshintsho ngoku, kwaye akukho nto iya kwenza ingqiqo kuwe ngaphezu kokufumanisa konke. Ukwazi ngokuqinisekileyo ukuba lithetha ukuthini eli phupha, kuya kufuneka ujonge kwezi zihloko zilandelayo, kuba impendulo izakuba kuzo.
Iphupha lokubona umfundisi
Kuyimfuneko ukuba ujonge isimo sabo sengqondo rhoqo uzama ukuphucula, kuba yonke into el mundo kufuneka iguquke. Zama ukuqonda ukuba ukuphupha umfundisi othetha naye luphawu oluqinisekileyo kwaye kubonisa ukuba usendleleni. Isalathiso kolu hlobo lwamaphupha kukuba uqhubeke uthandaza kwaye unxibelelana noThixo yonke imihla.
Ukuphupha ngokuthetha nomfundisi
Ixesha lifikile lokuba uzolise imithambo-luvo yakho kwaye kuyakubaluleka ukuba utshintshe indlela othethe ngayo nabantu. Indlela othetha ngayo yenze ukuba wonke umntu okujikeleziyo oyike impendulo yakho. Kuya kufuneka utshintshe ngaloo ndlela kwaye ufunde ukuthetha naye wonke umntu ngethoni ethambileyo, kuba iya kuba yeyona ilungileyo.
Ukuphupha ngomfundisi okuvayo uvuma
Abanye abantu babuyela umgama omde, bazikhumbule iimpazamo zabo, kwaye abanakuze bazixolele. Eli phupha libonisa ukuba awungekhe umelane nokungakhuli kwexesha elidlulileyo, kodwa kufuneka utshintshe. Ngubani ongazange one ngokwenza ilitye lokuqala? Eli binzana lisetyenziswe nguKristu libonisa ukuba kufuneka uzinyamezele ngakumbi iziphoso zakho, oko kukuthi, uqaphele kwaye uzixolele, kuba iyakuba sesona simo sengqondo sobulumko.
Iphupha lokuba ngumfundisi
Lo ngumqondiso omkhulu ngokunxulumene nokuzazi, oko kukuthi, uya kuba nakho ukusebenza kweli cala. Akukho nto iya kwenza ingqiqo kuwe kunale kwaye lelona xesha lifanelekileyo lokusebenzela kuyo. Umbingeleli ubonakalisa, emamela abanye, kwaye ngaphezulu kwayo yonke imisebenzi esebenza ukusombulula zonke iingxaki zabo.
Ukuphupha utata epulpitini
UThixo akazange akushiye wena kunye nosapho lwakho, ngoko ke akukho xesha niya kuba noxolo ngakumbi. Khumbula ukuba isenzo sokuphupha umfundisi epulpitini sibonisa iintsikelelo eziza kuza ekhayeni lakho. Sebenzisa eli nqanaba lobomi bakho ukuba ube nombulelo ngayo yonke into oyifumeneyo mva nje.
Ukuphupha ndithandana nomfundisi
Wonke umntu uyazi ukuba ababingeleli abanakutshata kwaye kufuneka bathathe isifungo sokuzigcina benyulu, ke lumka. Kuya kufuneka ulungiselele ukuphoxeka okukhulu kothando kwaye eyona ndlela yokwenza oko kukugcina ibhedi. Sukuzama ngandlela zonke ukufumanisa ukuba kuya kwenzeka ntoni, kuba ayizukuba sesona simo sengqondo.
Iphupha malunga noMbingeleli ogunyazisiweyo
Indlela oqhubene ngayo nabantu yenze uninzi lwenu lungaziva mnandi ngawe. Kusenokwenzeka ukuba ngexeshana elincinci uza kudlula ekuthotyweni okukhulu koluntu. Yilapho umbuzo wezenzo kunye nokuphendula kungena, oko kukuthi, unesimo sengqondo kwaye uza kubuya. Umthetho wobangela kunye nokuphumelela awusileli, ke tshintsha indlela ocinga ngayo kwaye yonke into iya kuphucuka.
Phupha malunga nentsikelelo kaBawo
Umntu osondele kakhulu kuwe ebethandaza yonke imihla ukuba akubuze ngenkuselo eninzi. Eli lelona xesha lifanelekileyo lokuziva iziphumo kunye nokuphupha umbingeleli uqinisekisa ukuba ukhuselekile. Zama ukuhlala unjalo, Oko kukuthi, uhlala unombulelo, kuba ube ngumntu osikelelweyo.
Ngaba inoluhlobo oluthile lwentsingiselo embi?
Hayi, kuba xa umntu ephupha ngento ethile, iya kuhlala inentsingiselo ekufuneka ibe intle kangangoko. Inyani yile yokuba uninzi lwabantu lukholelwa ekubeni iphupha kufuneka libonwe njengesiyolo. Wonke umntu wayenokubona ukuba ukuphupha umbingeleli kunentsingiselo edityaniswe kwicala lakhe elingaphakathi, oko kukuthi, ukuzazi.